Hazie njikọ SSH na-enweghị okwuntughe n'ime naanị usoro 3 | Site na Linux
Hazie njikọ SSH na-enweghị okwuntughe n'ime naanị usoro 3
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Na-atụ aro, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ebe ị ga-ahụ otu esi ejikọ PC na remotely site na SSH naanị ịbanye paswọọdụ na nke mbụ, yabụ ọbụlagodi na anyị malitegharịa kọmputa abụọ ahụ, a gaghị ajụ anyị maka paswọọdụ ahụ ọzọ.
Ma, ka anyị buru ụzọ hụ nkenke nkọwa banyere ihe bụ SSH:
SSH ọ bụ a protocol, a ụzọ nkwurịta okwu n'etiti kọmputa abụọ. Ọ na-enye anyị ohere ijikwa otu otu. Mgbe anyị jiri SSH nweta kọmputa ọzọ, a ga-egbu iwu na anyị banyere na njedebe ahụ na kọmputa nke ọzọ, n'ụzọ dị otú a anyị na-ejikwa / jikwaa ya.
Ihe niile a na-ebute site na SSH, ọ na-ezoro ezo ma na nke ukwu nke ọma nche.
Ugbu a, anyị ga-ahụ otu n'ime usoro atọ anyị ga-ahazi PC # 1 iji nweta PC # 2 na-enweghị itinye paswọọdụ:
Anyị nwere ọnọdụ ndị a:
PC # 1 - » Want chọrọ ijikọ na PC # 2, na-enweghị ịbanye paswọọdụ oge ọ bụla ị gbalịrị ijikọ na PC ọzọ a.
PC # 2 - » I tinyela ihe nkesa SSH. Nke a bụ otu PC # 1 ga-jikọọ, na-eme ya na-enweghị abanye a paswọọdụ. Na PC a, e nwere onye ọrụ aha ya mgbọrọgwụ.
Ka anyị malite…
1. En PC # 1 anyị na-ede ihe ndị a:
Nke a ga - eme ka igodo ọha. Ghara inwe mgbagwoju anya na "igodo ọha na nke onwe", m ga-akọwa ya nke ọma.
Ka e were ya na i nwere mkpịsị ugodi abụọ nke ụlọ gị n’akpa gị, otu nke ị ga-enye enyi gị nwaanyị ebe ọ bụ na gị na ya ebikọla, nke ọzọ abụrụ naanị gị, ị gaghị enye ya onye ọ bụla. Igodo ahụ, igodo ahụ ị nyere enyi gị nwanyị ga-ekwe ka ọ bata n'ụlọ gị n'agwaghị gị, na-ajụghị ikike gị, nri? nke ahụ bụ igodo ọha, "igodo" nke na-enye PC ohere ịnweta onye ọzọ na-enweghị ịrịọ maka ikike gị (ya bụ, na-abanyeghị aha njirimara + paswọọdụ)
Mgbe ha tinyere iwu ahụ, nke ahụ ga-apụta:
2. Naanị pịa [Tinye], nke abụọ gasịrị anyị pịa ọzọ [Tinye], na nke abụọ mgbe e mesịrị anyị pịa otu ugboro ọzọ [Tinye]. Echere m, anyị ga-pịa [Tinye] ngụkọta nke ugboro atọ (3), anyị na-pịa ya ... anyị anaghị ede ihe ọ bụla 🙂
Mgbe anyị mere nke a, ihe yiri ihe ndị a ga - apụta:
Njikere, anyị enweworị igodo ọha ... ugbu a, anyị kwesịrị inye ya onye ọ bụla anyị chọrọ (dịka ọmụmaatụ, nye ya enyi nwanyị anyị)
Ihe anyi choro bu na PC # 1 jikọọ na PC # 2, abanyela PC # 1 anyị mere ihe niile dị n'elu, na PC # 2 Anyị emebeghị ihe ọ bụla. Ezi, PC # 2 nwere adreesị IP dịka ọmụmaatụ 10.10.0.5.
3. Anyị tinyere PC # 1 nke na-esote:
Ihe nke a na-eme bụ inye gị igodo ọha na eze PC # 1 a PC # 2, ya bụ, ọ na-enye ya PC # 2 igodo ọha nke PC # 1mgbe PC # 1 ọ na-edobe igodo onwe ya, ị mara; igodo ahụ na-enyeghị onye ọ bụla. Ọ dị mkpa ka ịghara ihie ụzọ na onye ọrụ ahụ, yabụ, ọ bụrụ na onye ọrụmgbọrọgwụ"Ọ dịghị adị na PC # 2 ga-enye anyị njehie, ọ dị mkpa ịkọwapụta nke onye ọrụ anyị ga-eji maka nke a, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ ahụ nke anyị ji ahazi ịnweta na-enweghị paswọọdụ, ga-abụ otu ihe anyị ga-eji nweta n'ọdịnihu. Ozugbo emere nke a, ọ ga - adị ka nke a:
Na nzọụkwụ gara aga, ha ga-etinye paswọọdụ onye ọrụ na PC # 2.
Na voila ... edozi ihe niile 😀
Dị ka ọ na-apụta anyị na ọnụ, ka anyị nwalee ma ọ bụrụ na ihe niile rụrụ ọrụ 100% OK. Iji nwalee, anyị na-etinye:
Ọ bụrụ na ha chọrọ ịnweta kọmpụta ọzọ na-enweghị abanye paswọọdụ mgbe niile (PC # 3 dịka ọmụmaatụ), anyị nyere ya igodo ọhaneze anyị ma ọ bụ ya, ya bụ, ozugbo anyị mechara ihe ahụ #1 y #2 anyi agaghi eme ya ozo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta PC # 3 imaatu, nke nwere site na IP 10.10.99.156 anyị tinye:
Rute na nkuzi.
Kọwaa na ọkwa nchekwa mgbe anyị na-ekwu maka SSH dị elu nke ukwuu, ihe atụ nke m jiri kọwaa ụfọdụ usoro (nke inye igodo enyi anyị nwanyị) nwere ike ọ gaghị abụ ihe kacha mma, ebe ọ bụ na enyi anyị nwanyị nwere ike inye mkpịsị ugodi onye ozo. Mgbe anyị na-ekwu maka SSH, ụkpụrụ nchekwa dị mfe ịkọwa, mgbe anyị nwaa ịnweta kọmputa anyị (PC # 1) nyochaa ma ọ bụrụ na PC # 2 enwere igodo ọha na kọmputa anyị (na nke a enwere, n'ihi na anyị na-ahazi ya n'ụzọ ahụ), yabụ, ọ bụrụ na ọ dị, ọ dị mfe, lelee ma igodo ọha ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka igodo nzuzo anyị (nke anyị enyeghị ya onye ọ bụla). Ọ bụrụ na mkpịsị ugodi bụ otu ọ na-enye anyị ohere ịnweta, na uzọ ọzọ yana dịka nchekwa, ọ naghị enye anyị ohere ịbanye na kọmputa nke ọzọ.
Yabụ na ịmara… inye enyi nwanyị anyị igodo ụlọ abụghị ihe kachasị nchebe, mana ịkekọrịta igodo na ịnweta kọmputa ọzọ site na SSH dị mma. ^ _ '
Obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ, mkpesa ma ọ bụ aro mere ka m mara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Hazie njikọ SSH na-enweghị okwuntughe n'ime naanị usoro 3
Aghọtaghị m na ị na-akpachapụ anya maka nchekwa na-eme ụdị mmejọ a. Ọ bụrụ na nzọụkwụ ebe ọ na-ekwu, sị:
Anyị anaghị ede ihe ọ bụla, anyị furu efu ma ọ bụrụ na onye ọrụ jisie ike ịnweta PC anyị ma mepee ọnụ, ebe ọ na-akpaghị aka:
Ọ ga-abanye na-enweghị na-arịọ maka a paswọọdụ.
Ọ bụrụ na mmadụ enweta ohere na laptọọpụ m, ee, ha ga-enwe ike ịnweta PC # 2 na-enweghị ịbanye paswọọdụ ya, agbanyeghị dịka ị na-ekwu, enwere m obi ọjọọ banyere nchekwa, ị chere n'ezie na ịnweta ohere na laptọọpụ m bụ ihe dị mfe? HAHA.
Mgbe m na-ebili mgbe niile, m na-emechi ihuenyo ahụ, ma ọ bụghị mgbe 30 sekọnd nke enweghị ọrụ na laptọọpụ laptọọpụ ma ọ bụ keyboard, ọ ka ga-agbachi 😉
Ọ bụrụ na mmadụ zuru laptọọpụ gị, n'agbanyeghị ole egbochiri nnọkọ ahụ, ịnweta ohere na faịlụ ndị ahụ adịghị mkpa, ihe gbasara 5 nkeji na Linux bootable si USB. Ma ozugbo enwetara faịlụ ndị ahụ, ebe igodo nzuzo na-enweghị nchebe, ị nwere ike iji ya ozugbo, ma ọ bụ ka mma idetuo ya ma nweta sava gị ọ bụla nke ọma n'ụlọ gị. N'ezie, usoro a dị oke ọsọ nke na ịgaghị ama. Na nkeji 5 ị gara ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, enwere ike ịme ihe niile.
Safezọ dị mma bụ itinye paswọọdụ na igodo nzuzo, wee jiri ssh-agent ka ọ cheta paswọọdụ maka nnọkọ ahụ niile (ssh-tinye). N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ajụ maka paswọọdụ na nke mbụ ya, na omume ị ga-enwe njikọ na-enweghị paswọọdụ 90% nke oge, na mgbakwunye na ịchebe megide izu ohi ma ọ bụ intrusions.
Ọ bụ ihe na-enweghị isi ịnweta faịlụ ahụ? Have nụtụla banyere nhichapụ diski zuru ezu? (luks + cryptsetup)
Eeh, n'ezie, ọ bụrụ na i zoro ezo diski ya niile bụ okwu ọzọ, mana 90% nke ndị ọrụ anaghị eme ya n'ihi na ha amaghị etu esi eme ya na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ naghị akwụghachi ha ụgwọ. N’ụzọ dị iche, ịghara ịchekwa okwuntughe ezoro ezo ma ọ bụ igodo nzuzo ndị na-enweghị nchebe na disk bụ ihe onye ọ bụla nwere ike ịme, yana omume ọma.
Chekwa igodo nzuzo ndị a na-echekwabeghị na diski ezoro ezo dị ka ebe ị na-adọba ụgbọala gị na-ahapụ ụzọ meghere, ma ị na-ewe onye nche na doberman iji chebe ya. Ọ na-arụ ọrụ, ee, mana ọ dị nfe ma rụọ ọrụ nke ọma iji kpọchie ya ozugbo.
MMm anaghị eme nnukwu ihe ahụ, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịmepụta interface, mepụta IP ma jikọta ya na IP ahụ, yabụ ọbụlagodi na ha wepụrụ igodo ahụ, ha agaghị enwe ike ịchọta igwe ahụ n'ihi na igodo ahụ na-arụ ọrụ maka ụfọdụ IP. Ọ dabere na ihe ha chọrọ, ọ na-arụ ọrụ zuru oke maka m dịka onye ibe ahụ kọwara ya, enwere m sava nkeonwe n'ụlọ m anaghị m mkpa ịbawanye nchekwa n'ihi na ọ nwere VPN ahazi.
Ihe a niile nwere ike ịdabere na windo windo nke ga-ejikọta n'ọtụtụ * NIXs?
Enwere m putty mana m nwekwara ike iji Securecrt (ugbu a enwere m ya ederede)
Na ọnụ Windows (cmd) ekwenyesiri m ike na mba, ọ gaghị ekwe omume ebe ahụ.
Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị jiri Putty, ịnwere ike ịnwale ya, ọ nwere ike ịrụ ọrụ.
Ekele na nnabata na saịtị anyị 😀
Putty anakwerela -pw oke na iwu ndị ọzọ. (ex: -pw12345)
N'ezie, Super Putty dị jụụ karịa naanị Putty nkịtị. (Ọ bụ etiti maka Putty)
Yabụ na ekwesighi itinye ya.
Zaghachi nye erm3nda
Daalụ maka post, bara ezigbo uru. Ọ bụ ntakịrị ihe na-agwụ ike ịbanye na SSH maka ihe niile.
Ndewo na ekele gị nke ukwuu maka nleta gị na ikwu comment
Onweghi enyi, obi uto ịmara na ọ bara uru ... ọ bụrụ na anyị nwere ike inyere gị aka n'ụzọ ọ bụla ọzọ, anyị nwere obi ụtọ karịa 😉
Ekele na nnabata na saịtị ahụ.
Achọrọ m ijikọ na windonws pc na linux m ka m na-eme site na ọnụ m
Ọmarịcha .. ọ na-akpali mmụọ ịhụ ụdị nkuzi a, ọ na-eme m ka m sonyekwa na ahụmịhe m emegoro ka obodo nwee ike iji ha mee ihe. Daalụ n'ezie site na El Salvador.
José Gregorio dijo
Ana m ejikọ igwe na ubuntu na nke nwere debian mana ọ na-enye m njehie nke ọ na-enweghị ike nyochaa ma yabụ ọ jụrụ m maka paswọọdụ .. gịnị kpatara nke a ga-eji mee? O nwere ike ịbụ na nsụgharị nke ssh-keygen dị iche ma ọ bụ ihe na-eme?
Zaghachi Jose Gregorio
Tinye ebe a njehie ọ na-enye gị ka ị nwee ike inyere gị aka better
Ọzọkwa, ịnwere ike ịnwale itinye nke a na ọdụ:
Ihe nke a na-ehicha njikọ ndị ahụ (njikọ njikọ) SSH ịnwere.
Ma ọ bụrụ na achọrọ m iji otu igodo ọha maka ọtụtụ sava, enwere m ike ịme ya, ma ọ bụ ka m mepụta igodo maka sava ọ bụla m chọrọ ịnweta? Aga m anwale ya agbanyeghị, mana na ụfọdụ nkesa na-abaghị uru ka ị ghara ibibi ihe bara uru.
Dika m mere ya na laptọọpụ m, ọ bụ igodo dị iche maka ihe nkesa ọ bụla, n'eziokwu, echere m na ọ gaghị ekwe omume iji otu igodo ahụ maka ọtụtụ ... n'ihi na ID nke ihe nkesa ọ bụla dị iche, dị ka mkpịsị aka finger
Ndewo onyenwe aja. Anọ m na-agụ igodo ma achọpụtara m na ụzọ mkpịsị ugodi (nke ọha na nke onwe) na-ejere onye nkesa-ahịa ozi ka iziga ma nata nsogbu ma si otú a mata ibe ha, ya mere ọ nweghị ihe jikọrọ ya na paswọọdụ ị nwere iji nweta ihe nkesa, a na-eji nke ikpeazụ "mado" igodo ọha na ndị ntụkwasị obi nke sava ahụ. Yabụ ị nwere ike iji ya n'ọtụtụ ihe ịchọrọ ma ọ bụ mkpa.
Amaghị m ma m kọwara onwe m, mana egwuregwu ahụ bụ na iji nwee ike iji ụzọ igodo gị na sava ndị ọzọ, mgbe ị gbasoro nkuzi gị, ị ga - eme:
dee okwuntughe maka sava a ọzọ
Ndewo, ekele maka ntuziaka, ọ bụ naanị ya nyeere m aka. Ugbu a na achọrọ m ime ya na kọmpụta ọzọ enwere m ihe ndị a:
Ọdụ mmiri ọjọọ 'umask 077; ule -d ~ / .ssh || mkdir ~ / .ssh; pusi >> ~ / .ssh / ikike_keys '
Emere m ihe ị gwara anyị, mana ọ na-ajụ m paswọọdụ. M na-eme ka njikọ a doo anya m na-eme n'etiti sava okpu linux abụọ ... Gini ka ọ ga - abụ?
Enweela m anya na / wdg / ssh / sshd_config
Enweela m sava abụọ
PC2 = Linux okpu uhie 6.4
PC2 = Linux okpu uhie 5.1
A ghaghị ịhazi ọrụ ssh n'ụzọ ziri ezi (/ wdg / ssh / sshd_config faịlụ na PC2) ka ọ rụọ ọrụ.
PC2 = Uhie Uhie 5.1
Ndewo ndị ọrụ ibe, enwere m mkpa ịtọlite ​​mmekọrịta ntụkwasị obi n'etiti ihe nkesa 1 Linux Centos 5.3 na Unix Sco5.7 mana enwere m nsogbu na mgbe m na-eme 3 nke i copomi isi site na Linux ruo Unix ana m enweta ozi / usr / bin / ssh-copy-id: ERROR: Onweghi ihe ndi mmadu chotara, gini kpatara o ji abu?
tinye aha dijo
M soro nkuzi nzọụkwụ site nzọụkwụ. Ọ naghị enye m njehie ọ bụla, mana na njedebe mgbe m jikọtara PC1 na PC2 ọ na-ajụ m maka paswọọdụ mgbọrọgwụ oge ọ bụla m jikọọ.
Onwere onye chere ihe o nwere ike ịbụ?
Zaghachi ka aha
Ọ dị ka mgbe ị mepụtasịrị igodo ahụ, ị ​​ga-egbu ssh-add ka onye nyocha wee nwee ike iji ya.
agba agba dijo
Ka m na-ehichapụ igodo nnweta, ọ naghị amata ihe ọ bụla, e hiwere m, nyere aka, ọ naghị abanye ihe ọ bụla
Zaghachi andrea colodro
Daalụ nke ukwuu, ọ rụrụ ọrụ zuru oke
Zaghachi Jordan Acosta
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ntuziaka a! Ọ dị mfe ma ọ na-abata n'aka maka mgbe ị nwere sava gị n'ebe ahụ ịga ije na ịgaghị abanye igodo ma si otú a gbanye ihe ate
Zaghachi ka miniminiyo
Amaghị m iji ssh-copy-id ma ọ bụ na-akpaghị aka.
Eziokwu bụ na m ruru ruo n'ókè nke ide paswọọdụ, yabụ ihe m na-eme bụ ịchekwa ya na ntụgharị okwu DEFAULT, nke a na-echekwa n'oge nnọkọ ahụ.
Achọghị m ịma ide ya otu ugboro oge ọ bụla m gbanye PC, mpịakọta a ga-etinye ya oge ọ bụla ọ disconnects ma ọ bụ ihe ndị dị ka 😀
SSH Mba Jutsu!
ezi nkuzi ... ma ọ bụrụ na m chọrọ ịgafe ozi ??? kedu ka m ga-esi mee ya?
Zaghachi ka mmiri
Ndewo, onyinye gị na-atọ ụtọ, mana enwere m obi abụọ gbasara isiokwu yiri ya
Zaghachi diego gonzalez
Gbalịa usoro ndị dị n'elu, mana mgbe ị na-achọ idetuo igodo ihe nkesa 2 (PC2) ọ na-agwa m na iwu ahụ adịghị.
bash: ssh-copy-id: iwu ahụghị
Enwere m ike i copyomi igodo ahụ na aka?
Zaghachi Carlos Hernandez
Ọmarịcha !! Achọrọ m nkọwa nke dị mfe ma rụọ ọrụ zuru oke
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere ụzọ isi mee iwu a ssh-copy-id. Ebe ọ bụ na m wụnye Open ssh maka Windows, ssh na-arụrụ m ọrụ na DOS mana ọ nweghị iwu a ssh-copy-id. Ọ ga-amasị m ịma otu esi eziga igodo ọha na eze na sava linux ndị ọzọ (Linux server). Daalụ nke ukwuu.
Ndewo. Achọrọ m ịmepụta mmekọrịta ntụkwasị obi n'etiti ihe nkesa linux na igwe Windows. Wụnye SSH maka Windows ọ na-arụrụ m ọrụ. Mana iwu ssh-copy-id adịghị na ngwa ọrụ a.
Ha ma ufodi ozo n’eme ya n’enweghi ssh-copy-id.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị.
Ma ajụjụ nke a bụ inwe ike jikọọ na-enweghị a paswọọdụ, ọ bụrụ na anyị na-etinye a passphrase ọ ga-ajụ anyị maka na ngafe jikọọ na ọ bụghị ebumnobi nke a
Ọ baara m ezigbo uru maka kọmpụta fp kọmputa m, ekele 🙂
Worryfọdụ na-echegbu onwe ha maka etu iwe nwere ike isi banye paswọọdụ (passphrase), maka nke ahụ, dị ka e kwuru n'elu, ọ bụ «onye ọrụ -» na m nwekwara ya ahazi ya na Keepass na ọrụ ya Autodị Nchekwa onwe, yabụ m M na-akpọku ọdụ na njikọ nke igodo ha ahazi njikere, m nwekwara "aliases" maka arịrịọ ọ bụla na ihe niile dị mfe.
Nwee otutu Obi uto !!
Ezigbo ezigbo Ama 🙂 mana enwerem ajuju ...
Enwere m PC10 nke bụ ebe m na-edebe ozi ahụ, e zigara ozi ahụ na pc1 - pc2 - pc3, na PC10, kedu ka m ga - esi mee pc1, pc na pc3 jiri otu igodo ahụ nweta PC10 na - enweghị igodo.
Zaghachi Felipe Oyarce
Kedụ ka m ga - esi depụta ihe dị na igwe1 na igwe igwe2 n’ejighị ssh ip @ ụsụụ ndị agha na igwe1 Amaghim ma m ghota xD
Afọ iri agafeela kemgbe akwụkwọ a na m na-eleta ya oge ọ bụla m chọrọ ya. Dị ka ụfọdụ nkuzi ndị ọzọ dị ebe a, ha guzoro ule nke oge. Ekele na ekele!
Edide ka ịmalitegharịa ma weghachite oge anyị na Xfce
Tụlee faịlụ ma ọ bụ ndekọ na Meld